Qeybta 1: wmv vs MP4, Faraqa u dhexeeya wmv iyo MP4
Qeybta 2: Sida loo Download iyo Play MP4 iyo wmv
Wmv u taagan tahay Windows Media File. Format waxaa wada sameeyey Microsoft ee ujeedada express bixinta warbaahinta formatting ee nidaamka Windows ku salaysan. Abuuray oo ku salaysan MPEG-4 madal, siyaalaha ugu horeeyay ee qaab wmv u yimid si uu u jiro sanadkii 1999 laakiin heerka aan la qaatay SMPTE ilaa 2006. Labada wmv iyo file MP4 qaabab awoodi user dhamaadka hab fudud si ay u abuuraan sare videos multimedia oo tayo leh kuwaas oo ciriiri ee dabiiciga ah. Qaab file kasta wuxuu leeyahay faa'iidada iyo khasaaraha ay, inkastoo. Wmv waa qaab multimedia Tifaftirayaasha, laakiin looma haysto inuu yahay qaab lossy, halka iyo files MP4 waxaa loo tixgeliyaa "Lossy", sababtoo ah macluumaadka aan ka isla markiiba la xiriira waxaa lagu tuuraa marka file la badbaadiyey in mid ka mid ah qaabab kuwaas. Waayo, tan u sabab, iyo qaar kale, files wmv waxa ay noqon inta ka badan files MP4 noqon karaa, oo aan ku habboon in kiiska loo isticmaalo dhamaadka isku mid ah.
Regelingen, ay abuureen Microsoft, ayaa helay ay caan qayb ahaan sabab u awoodda ay qaab faylka si ay u fuliyaan xogta Digital Rights Mangement. Shaqeynta Tani waxay u ogolaaneysaa Abuuraha reer content in ay aadka u ilaaliyo xogta ay, laakiin sidoo kale abuuri xadeynta signficiant u user dhamaadka. Files MP4 la sii xajinayaan karaan in ay ku jiraan macluumaad DRM, laakiin in ay encapsulation hooyo, oo aan haysan awood this. Kiiska isticmaalka alaabta dhamaadka video ay si weyn u saameyn ku yeelan doonto go'aanka sida in qaab sax ah file in la doorto.
Developer MP4 loo soo sameeyay sida interation ah ee qaab file QuickTime asalka Apple ee, guud ahaan xusay sida MOV. Ayaa qaab QuickTime mar heysatay internet-ka, laakiin waxa uu haatan u gurteen soo caan baxay, marka laga reebo sida uu isticmaalo qoyska Apple ee alaabta. Qaab MP4 ayaa, si kastaba ha ahaatee, waxa uu noqday mid sii isticmaalo oo caan ah ay sabab u tahay in sharcigaasi waafaqsan cross-madal. Qaab file MP4 ayaa isticmaalaan ka MPEG 4-sireed oo ah ISO waa nooca file caadiga ah in sidoo kale mararka qaarkood Ioogu la .m4a kordhinta iyo .m4p. Wmv waa qaab file ee ay Microsoft ah. Si ka duwan MP4, ma ahan madal lossy ah, oo waxaa la qaatay xal sare, wax soo saarka isticmaalaa sida DVD-yada, Bluray iyo is dulfuulan video iyo multimedia oo ah qaabab kale. Awoodda ay file wmv ah in ay ku jiraan macluumaad Digital Rights Management waa sababaha ugu muhiimsan ee ay ku dhaqanka soo-saarka waaweyn iyo ururada video xirfadeed.
Taariikhda Nooca file Apple .MOV, sidoo kale loo yaqaan QuickTime, ayaa waxaa si qoto dheer Guuriyo qoyska Apple ee qalabka. Sanadkii 1999, si kastaba ha ahaatee, qaybta dadweynaha bedelay oo uu dheereeyey nooca MOV faylka si ay u dar shaqeynta iyo in la kordhiyo cross-madal awoodaha video. The jirka ISO maamula kormeera daayo oo ka mid ah MPEG-4 qaab faylka qoyska. Iterations nooca file MP4 ah ayaa waxaa ka mid ah sii daayo Descriptors UJEEDDO horudhac ah, oo ka shaqeynayaan kale MPEG qoyska. Iyadoo wmv markii hore abuuray 1999 by Microsoft, waxa la celiyay oo u soo gudbiyey ay ka SMPTE abaalmarinta ah ee jaango'an ee 2003, oo ay version 9. Sanadkii 2006, qaab la ansixiyey sida caadiga ah u furan, taas oo uu u ogolaaday in ay kordhiso isticmaalka galay xaaladaha cusub oo ballaadhin gaari si weyn.
Caanka MP4 ayaa waxaa loogu talagalay in uu cross-madal lana habeeyo si loogu isticmaalo siyaabo kala duwan. Maanta waa mid aad loo jecel yahay, laga yaabo qaabka ugu caansan video iyo multimedia isticmaalo internet-ka. Awooddeeda riixo, halka lossy, waa mid cajiib ah oo u oggolaanaysa in geeyo. Files wmv waa weyn oo caan ah oo loo isticmaalo qaabab iyo codsiyada in laga yaabo in la qarin hortiisa Cad ah. Tusaale ahaan, DVD-yada iyo BluRays ugu jira qaab file wmv ee dabiiciga ah. Inkasta oo dadka isticmaala dhamaadka oo dhalleeceeyey ay ka dhisay shaqeynta DRM iyo dhibaatooyinka uu dhigto, waxa uu muujinayaa wax calaamado ah oo hoos u soo caan baxay.
Durdurrada Data The MPEG-4 nooca file ku duudduuban weel, oo waa in loo gudbiyaa sida MP4. Weelka waa waxa sii video, audio iyo waxyaabaha kale ee soo bandhigidda multimedia ah wada oo ka caawisaa ciyaaryahan si ay u soo bandhigaan. A file index gaar ah oo loo yaqaan BIF MPEG-4 ah sheegayaa ciyaaryahanka meesha laga helayo files content la xiriira gudaha weelka. File wmv wuxuu isticmaalaa weelka Systems Advanced Qaabka (ASF) si encapsulate waxyaalaha aasaaska ah ee bandhigga miidhiyaha badan. The encapsulation file AVI sidoo kale noqon kartaa baadan, iyo halka ay tani ma ogola u DRM, ma ogolaanayaan riixo weyn.
Metadata Weelka MP4 ayaa qof huwan karo ma aha oo kaliya macluumaadka loo baahan yahay soo bandhigidda, laakiin sidoo kale macluumaad dheeraad ah sida horyaal, content dheeriga ah oo dheeraad ah oo maqal ah oo dheeraad ah ama beddelaad ah.
Wmv gudbiyo isu awoodaan in ay taageeraan tagging iyo metadata sida dabool tahay waa. Doorashadan ayaa ah sii cajiib file wmv ah sida AVI ah, si kastaba ha ahaatee, xaddidaya kara metadata ah.
Faa'iido 1. qaab file MP4 yahay oo cadaalad ah universal caadiga ah.
2. Qalabka socda Linux, Windows, macruufka iyo Android yihiin oo dhan oo awood u leh in ay taageerto files MP4.
3. Riixo waxaa suurtagal ah la files MP4. 1. wmv waa fursad weyn u files oo waa in heerka ugu sareeya ee tayo leh.
2. Wmv waa doorasho fiican u files oo laga yaabo ka faa'iideysan doona DRM.
3. Wmv waa qaab si aad ah loo ansixiyay isticmaalaan qalabka badan iyo qalabka.
Qasaarooyinka 1. uusan Habka encapsulation in MP4 tuur xogta aan loo baahnayn, waa qaab file lossy samaynta.
2. Size file ayaa weli guud ahaan caddaalad ah oo waaweyn.
3. Encapsulation MP4 ma aha model ah oo lahaansho. 1. wmv, halka heerka furan oo loo isticmaalo si ballaaran in codsiyada sida DVD-yada iyo BluRays, ma ku haboon yahay qaar ka mid ah codsiyada video dheeraad ah ee maanta jira sababta oo ah keentay size file.
2. Files Streaming wmv waa dherer ah iyo habka suurtagal ahayn.
3. Isticmaalayaasha ayaa ka xumaaday encapsulation DRM.
U isticmaala in ay Ku dhawaad ​​wax u ciyaara videos! Qalabka, baabuurta, iyo qalabka korontada la qaadi karo, marka lagu daro kombiyuutarada iyo casriga ah. Noocyo badan oo kala duwan ee qalabka Fasiri kartaan wmv, laakiin wuxuu u badan yahay loo isticmaalo oo mugga xaaladaha video sida DVD-yada.
Related links 1. Waa Maxay Qaabka MP4?
3. .MP4 File 1. MP4 vs wmv
3. Waa maxay File wmv ah?
Qeybta 2: Sida loo Download iyo Play MP4 iyo wmv?
MP4 iyo wmv jira laba qaabab badanaa loo isticmaalaa video files hadhay oo la mid ah oo kala duwan. Labada qaabab file kuwani waa diyaar ahaadaan si loogu free internet ka download, laakiin waxaad u baahan tahay nooc ka mid ah xirmada software dibadda si ay u soo bixi. Sidaas darteed haddii aad ku heynaa inaan u xirmo la mid ah software kaa caawin karaa in dhacdadaas oo kale, ka dibna Wondershare AllMyTube waa xalka ugu fiican ee aad u!
Sida loo soo bixi MP4 iyo wmv isticmaalaya Wondershare AllMyTube?
Haddii aad indhaha ku heynaa in degsado MP4 iyo wmv video files isticmaalaya Wondershare AllMyTube, markaas fadlan raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Tallaabada 2 Raadi aad file MP4 ama wmv inaad kala soo baxdo
Kadib markii ay Wondershare AllMyTube xirmo software-ka, tallaabada xigta waa in la bilaabo raadinaya MP4 ama file wmv in aad rabto in aad kala soo bixi. Waxaad isticmaali kartaa browser kasta oo internet ah ee raadinaya jecel videos aad. Waxaa jira dhowr websites sida YouTube, Dailymotion iwm ka halkaas oo aad ka heli karto MP4 tayada ugu wanaagsan iyo files wmv ah.
Marka aad dhamaysato habka download, file ka soo dejisan waxaa laga heli karaa "uga dhammaatay" qaybta ka meesha aad u bedeli karaan video uu ku noqon karo qaab kale oo ka duwan aad rabto. Tusaale ahaan, waxaad kala soo bixi video MP4 ah oo aad dooran kartaa in aad loogu badalo video MP4 in la wmv adigoo riixaya "Beddelaan" button, ka dibna waxay doortaa qaab ah in ay "Wmv".
Talaabada 5 Play faylka wmv bixi
> Resource > MP4 > wmv vs MP4, Faraqa u dhexeeya wmv iyo MP4